चार सदाचारी, ति कर्मयोगी:: Naya Nepal
एक अबोध बालक, जसले सायदै सोचेका थिए ‘मेरो आँखाको दृष्टि फर्कनेछ र यो जुनीमा सप्तरंगी संसार देख्न पाउनेछु ।’ जसै उनलाई यो अनपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन्छ उनले पहिलो पटक के देख्न चाहन्छ ?त्यही देवतातुल्य डाक्टर, जसले उनलाई सोच्दा पनि नसोचेको खुसी फर्काइदिए ।आँखा खोल्दा उनले देख्छन्, एक बटुलो र निर्दोस अनुहार । खस्रो तर दिव्य आभाले फक्रिएको । अनायसै उनको हात त्यो अनुहार सुम्मसुम्याउन हतारिन्छ । तिनको टाउको, अनुहार, चस्मा अनि आँखा । सबै एक एक स्पर्श गरेपछि बालकको गदगद् हृदयले भन्दो हो, ‘तिमी पनि साधरण रहेछौं, म जस्तै । तर, कति असाधरण काम गरिरहेछौं ।’डा. सन्दुक रुइतसँगको यो दृश्यांश हेरेपछि जसको पनि मन भक्कानिन्छ, थोरै करुणाले र धेरै हार्दिकताले ।१३ बर्षे रोशन थिङले मोतियाविन्दुको कारण दृष्टि गुमाएका थिए । हेटौंडाको सामुदायिक आँखा अस्पतालमा डा. सन्दुक रुइतले उनको आँखाको शल्यक्रिया गरिदिएका थिए, निशुल्क । शल्यक्रियापछि पहिलो पटक आँखाको पट्टी खोल्दा रोशन कति खुसी थिए ? भिडियोमा देख्न सकिन्छ । डा. रुइतले एक साक्षतकारमा सुनाएका छन्, ‘यस्तो एग्रेसिभ रियाक्सन धेरै देखेको छैन, धेरै सुन्दर रियाक्सन ।’पहिलो पटक संसार देख्दा मान्छेको अनुहारमा जुन खुसीको लहर छरिन्छ, डा. रुइत हरेक दिन त्यस्तै खुसी बटुल्न आतुर हुन्छन् । दिनमै पचासौं जनाको खुसीमा आफुलाई समाहित गरिदिन्छन् । र, त्यसबाट प्राप्त हुने अपुरणिय आनन्दमा मग्न हुन्छन् ।ओशो भन्छन्, ‘सुख र दुःख दुबै अस्थायी हुन् । स्थायी भनेको आनन्द हो, जुन हामी आफै भित्रबाट प्रकट हुन्छ ।’ अतः यस्तो आनन्दको मूल स्रोत हो, सत्कर्म ।केही यस्ता पात्र, जो सत्कर्मबाट जीवनको सार्थकता पहिल्याउँछन् । जस्तो कि, कुलमान घिसिङ । जस्तो कि, महावीर पुन । जस्तो कि, गोविन्द केसी । जस्तो कि, सन्दुक रुइत । यी यस्ता चार पात्र हुन्, जसले मुलुकमा आशा, उमंग र उत्साहलाई निभ्न दिएका छैनन् ।मुलुकमा धूर्त, लोभी, भ्रष्ट, असुरहरुको जत्था मात्र छैन, केही त कर्मयोगी र सदाचारी पनि छन् जसले कर्म र निष्ठाको आलोकमा उभिएर मुलुकमा आशा, उत्साह, उमंग बाँढिरहेका छन् ।
स्थिती कतिसम्म भयावह थियो भने धनपतिहरुले जेनेरेटर–इन्र्भटर जगेडा राख्नुपर्ने, दीनदुःखीले टुकी जोहो गर्नुपर्ने । सर्बत्र अन्धकार, निष्पट अन्धकार । बिजुली आउने÷जाने टुंगो छैन । लोडसेडिङको लम्बेतान तालिकाले देखाउँछ, १८ घण्टा त अध्याँरोमा बस्नुपर्नेछ ।यो अन्धकारमा एकाथरी अन्यौल भविष्य र अत्यासले सुस्केरा हाल्दै रात कटाइरहे, अर्कोथरी अकुत धनदौलत थुपार्न सल्बलाइरहे । १८ घण्टासम्मको अन्धकारले मुलुकलाई कति पछाडि धकेल्यो ? कति उद्यम–व्यवसाय चौपट भयो ? कतिको सपना तुहियो ? कतिले घर छाडे ? कति चिन्ता र डिप्रेसनले ग्रस्त भए ? कति आत्महत्या गर्न बाध्य भए ? लेखाजोखा गरिसाध्य छैन । यही कुटिल र जटिल पृष्टभूमीमा उदय हुन्छ, कुलमान घिसिङको ।सिनेमाका नायक झै भ्रष्ट व्यवस्थामाथि निर्भिकतासाथ हस्तक्षेप गर्दै उद्घोष गर्छन्, ‘अब तपाईंहरुले अध्याँरोमा बस्नुपर्दैन । निर्धक्क विजुली बाल्नुभए हुन्छ । अब सधै–सधैका लागि लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।’नभन्दै विद्युत प्राधिकरणको शब्दकोशबाट ‘लोडसेडिङ’ हट्छ । अविछिन्न बिद्युत अपूर्तिले मुलुक धपक्कै बल्छ ।के कुलमान घिसिङले छुःमन्तर गरेर यस्तो संभव भयो ? के उनीसँग जादुको छडी थियो ? एकदमै हार्दिकतासाथ कुलमान घिसिङ भन्ने गर्छन्, ‘मैले त त्यस्तो केही गरेको होइन । बस् आफ्नो कर्तव्य मात्र निर्वाह गरेको हो ।’एउटा इमान्दार कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य बोध गरिदिँदा र त्यसलाई दृढतासाथ पालना गरिदिँदा कत्रो कायपलट ?आखिर उनी को हुन् र ? रामेछापको एउटा विकट गाउँमा हुर्केका मामुली किसानको छोरो । स्कुले जीवनभर उनले बिजुली देखेनन्, टुकी बालेर पढे । पाँच कक्षा पास गरेर काठमाडौं आए । काठमाडौं आएपछि उनले देखे झिलिमिली बिजुली । यो उज्यालो देखेपछि उनले प्रण गरे, ‘मेरो गाउँ बेथानमा पनि यसरी नै बिजुली बाल्छु ।’काठमाडौंमा आफ्ना दाइहरुसँग बसेर उनले पढे । पढाईमा मिहेनती । मेधावी । पढ्दै गए र छात्रावृत्तिमा भारतमा पढ्न गए । त्यहाँबाट फर्कदा उनको हातमा बिएस्सी इलेक्ट्रिक इन्जिनियरको प्रमाणपत्र थियो । हृदयभरी थियो, नयाँ जोश र उर्जा ।अन्ततः स्वदेश फर्किएर उनी विद्युत प्राधिकरणमा सातौ तहको इन्जिनियरको जागिरे भए । यता जागिर यथावत छ, उता पुल्कोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे । त्यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा इएमबीए पनि सकाए । एकातिर प्राविधिक ज्ञान, अर्कोतिर व्यवस्थापकिय गुण । यही ज्ञानगुणले बनायो उनलाई, उज्यालोको पर्याय ।उनले क्याम्पसमा जे पढे, व्यवहारिक जीवनमा त्यसैको उपयोग गरे । चिलिमे जलविद्युतको जिम्मेवारी पाएपछि उनले आफ्नो क्षमतालाई भरपुर प्रयोग गरे । आखिरमा छोटो समयमै चिलिमे परियोजनालाई सफलताको विन्दुमा पु¥याइदिए । तर, पछि उनलाई उक्त परियोजनाबाट विच्छेद गरेर केन्द्रमा तानियो । दुई बर्षसम्म भूमिकाविहिन बनाइयो । उनलाई कतिसम्म गलाइयो भने, राजीनामा दिने मुडमा सम्म पुगे ।जब तत्कालिन सरकारले उनलाई सुयोग्य देखेर प्राधिकरणको कप्तानी हाँक्ने जिम्मेवारी दिए, तब उनले आफ्नो जुझारु र कर्मठ अवयवलाई गतिशिल बनाइरहे । घरको तातो भात र न्यानो ओछ्यान छाडे । भोग–विलास र ऐश आरम त्यागे । त्यही त्यागको प्रतिफल थियो, मुलुकको उज्यालो ।अनेक प्रपञ्च रचेर दिनदिनै लोडसेडिङको तालिका निकाल्ने तत्कालिन विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले र उनलाई आड दिने नेता, साथ दिने कर्मचारी, हात दिने व्यापारीले कसरी यत्तिका बर्षसम्म मुलुकमा अँध्यारोको बिजनेस गरिरहेका रहेछन् ? जनताले थाहा पाए । इन्र्भटर, जनेरेटर, सोलार प्लान्ट आदिको धन्दाबाट अकुत दौलत थुपार्नका लागि कतिसम्म घटिया तौर–तरिका अपनाइएको रहेछ ? जनताले थाह पाए ।कुलमान घिसिङ जस्तो सदाचारी र कर्मयोगी यो भ्रष्ट व्यवस्थाको क्रमभंग नगरिदिएको भए आज पनि हामीले सुस्केरा हाल्नुपथ्यों, लोडसेडिङको तालिका हेर्दै ।
गोर्खा आर्मीका छोरो महावीर पुनले आफ्नो पढाईं सकाएर पढाउने काम गरे । सोही क्रममा छात्रवृत्ति पाएर अमेरिका पुगेका उनी स्नाकोत्तर गरेर गाउँ फर्किए । गाउँमा हिमाञ्चल उमाबि स्थापना गरे । त्यो दूरदराजको गाउँमा उनलाई कम्प्युटर प्रणालीबाट पठनपाठन गराउने हुटहुटी जाग्यो । उनले देश–विदेशमा बस्ने साथीभाई गुहारे र कम्प्युटर जोरजाम गरे ।कम्प्युटर चलाउनका लागि स्थानिय खोलाबाट विद्युत उत्पादन गरे । यतिमै उनी रोकिएनन् । गाउँभर इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने योजना बनाए । उनको यो महत्वकांक्षी योजनालाई बिबिसीले प्रसार गरिदियो । अन्ततः विश्वभरका कतिपय दाता उनको कामलाई होस्टेमा हैंसे गर्न तत्पर भए । त्यसरी जुटेको सहयोगबाट उनले नांगी र राम्चे आसपासका गाउँमा ताररहित इन्टरनेट सुविधा दिलाए । सन् २००३ मा यी दुई गाउँ इन्टरनेटबाट विश्वसँग जोडियो ।गीतामा एउटा वाक्यांश छ, ‘कर्म गर तर फलप्रति आशक्तिरहित भएर ।’ महावीर पुन कुनै लाभ-हानीको हिसाब गरेर यो कर्ममा लागेका थिएनन् । उनलाई त केवल सार्थक कर्म गर्नु थियो । आखिर यही कर्मले उनलाई म्यागसेसे सम्मान दिलायो । र, फराकिलो चिनारी पनि ।यही चिनारी बोकर आज महावीर पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सारथी बनेको छन् । उनी त्यही रातदिन खटिन्छन् । बेलामौकामा रमाइलो गर्छन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई नयाँ खोज–अध्ययन र आविष्कारको थलो बनाउन मरिमेटेका छन् ।
एउटा लिखुरे ज्यान । झोलातुम्बी बेकेका छन् । दूरदराज चाहरेका छन् । स्टेथोस्कोप भिरेर गरिब–निमुखाको घर–दैलोमा पुगेका छन् । रोगीहरुको जाँच, उपकार गरेका छन् ।जहाँ जे भेट्छन्, त्यही खान्छन् । न उनलाई लुगाफाटोको पर्वाह छ, न खानेकुराको । हिँड्ने, बस्ने केही कुराको चिन्ता छैन । आफ्नै जीवन र भविष्यको पनि । चिन्ता छ त, जन स्वास्थ्यको ।जन–स्वास्थ्यका खातिर उनी सरकारमाथि खबरदारी गर्छन् । औंला उठाउँछन् । र, बेलाबखत त राज्य संयन्त्रलाई नै आच्छु–आच्छु बनाइदिन्छन् । सत्यमा कत्रो तागत ?उनी यसकारण आफ्नो ज्यानलाई बाजी लगाइरहन्छन्, ताकि मुलुकको स्वास्थ्य संयन्त्रको शुद्धिकरण होस् ।उनी अविवाहित छन् । आफ्नो तलब र अहिले निवृत्तिभरणबाट आउने पैसा समेत विपन्नको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गरिरहेका छन् उनी । देशका कुनाकाप्चा पुगेर उनले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइसकेका छन् ।न उनलाई सुकिलो–मुकिलो भएर अस्पतालको शोभा बढाउनुछ, न हतार–हतार क्लिनिकहरुमा फन्को लगाएर बैंक ब्यालेन्स बढाउनुछ, न कसैको आङ कन्याइदिएर पद र प्रतिष्ठा हत्याउनुछ । यि सदाचारीलाई त त्यतीमात्र भइदिए पुग्छ, जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र च्याँखे दाउ हान्ने अखडा नबनोस् । स्वास्थ्य संयन्त्रहरु चुस्त र भरपर्दो बनोस् । गरिब–निमुखाले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् । स्वास्थ्य सेवा सबैको घर–घरमा पुगोस् ।खासगरी नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि उनले अहिलेसम्म २ सय ४० भन्दा बढी दिन त अनशनमै बसिसकेका छन् । पटक पटक अनशन बसेपछि कतिपय सुधार समेत भएको छ । जस्तो कि, चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको, विद्यार्थी भर्ना र कलेजका सम्बन्धनमा हुनेगरेका अनियमितता नियन्त्रण भएको, एमबीबीएस शुल्क जथाभावी असुल्ने धन्दा रोकिएको आदि ।सरकारी कोटामा छात्रवृत्ति पाएर चिकित्सक बनेका डा. केसीले २७ बर्ष शिक्षण अस्पतालमा काम गरे । तीन दशक बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिए ।
तिलगंगा आँखा अस्पतालको मूल ढोकाबाट बर्षेनी एक लाख व्यक्ति प्रवेश गर्छन्, जसलाई आफ्नो बाटो पहिल्याउन पनि अरुको साहारा चाहिन्छ । किनभने उनीहरुसँग दृष्टि हुँदैन । तर, अस्पतालबाट बाहिरिदै गर्दा उनीहरुका दुई आँखाले संसार हेर्न सक्छन् । हँसिलो अनुहार र मनभरी शुभेच्छा बोकेर उनीहरु अस्पतालबाट बाहिरिन्छन् । अतः उनीहरुका दृष्टिदाता हुन्, डा. सन्दुक रुइत ।हिसाब किताब गर्ने हो भने, एक लाख २५ हजारभन्दा बढीको आँखाको ज्योति फर्काइदिएका छन् डा. सन्दुक रुइतले ।डा. रुइतको दृढता, लगाव, इमान, कर्म, निरन्तरता र संकल्पको नतिजा, आज नेपाल आँखा उपचारका लागि एक भरपर्दो थलो बनेको छ । सस्तो र प्रभावकारी उपचारका लागि उदाहरण बनेको छ । नेपालका कुना कन्दराबाट मात्र होइन, भारत, चीन, पाकिस्तान, भुटान जस्ता देशबाट समेत तिलगंगामा आँखाको उपचारका लागि लस्कर लाग्ने गरेको छ । र यसबाट विश्वमा सन्देश पुगेको छ, ‘नेपालमा अन्धोपन निवारणका लागि राम्रो समाधान छ ।’ताप्लेजुंगको विकट गाउँ ओलाङचुङगोलाम जन्मेका उनले सोचेका थिएनन्, कुनै दिन डाक्टर बन्नेछु । डाक्टर बनेरै सबैको श्रद्धा बटुल्नेछु ।बुवाले पढ्नका लागि दार्जिलिङ पठाए । त्यसपछि उनी काठमाडौं आए । बहिनीसँगै बसेर पढ्न थाले । बहिनीलाई क्षयरोग लाग्यो । तर, जति उपचार गर्दा पनि बहिनीलाई बचाउँन सकिएन । बहिनीको मृत्युले उनलाई जीवनको उदेश्य र अर्थप्रति प्रश्न गर्न मन लाग्यो ।यही प्रश्नले उनलाई डाक्टर बन्न उक्सायो । त्यसपछि उनी भारतको लखनउमा पढेर नेपाल फर्किए । बीर अस्पतालमा काम गरे । त्यहाँ उनी आँखा विभागमा काम गर्न थाले । सोही बखत एउटा क्याम्पमा पुगेका उनलाई आँखाको डाक्टर बन्न प्रेरित ग¥यो ।पछि उनले तीलगंगा अस्पताल सुरु गरे । यसमा उनलाई डा. रीता गुरुङको साथ छँदै थियो । दुई वटा कोठाबाट सुरु गरेका तीलगंगा अस्पताल अहिले आँखा उपचारका लागि देश त्यसबेला उनीहरु अहोरात्र काममा खटिन्थे । खासगरी मोतियाविन्दु भएका विरामीको शल्यक्रियामा उनले ठूलो सफलता हासिल गरे । तर, यसपछाडिको संघर्ष पनि कम्ता घतलाग्दो छैन ।